Xarun Cilmi baaris iyo feker curin oo laga furay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Xarun Cilmi baaris iyo feker curin oo laga furay Muqdisho
Muqdisho (KON) - Waxaa Maantay Magaalada Muqdisho laga furay Xarun Cilmi baaris iyo feker curin "The Heritage Institute for Policy Studies (HIPS)", ayadoo Munaasabaddaan furitaanka ay kasoo qaybgaleen Wasiirro, siyaasiyiin, aqoonyahanno, Xildhibaano iyo dadweyne kale oo lagu casuumay.
Machadka Heritage ayaa noqon doono Machad Cilmiga lagu baaro, soona saari doona Warbixinno ku saabsan Arrimaha ugu dhibka badan Soomaaliya iyo Geeska Afrika, qaban doonanah Wacyi-galin iyo dood-cilmiyeedyo.
Xafladda furitaanka oo Maantay ka dhacday Hotelka Jaziira ee Caasimada Dalka.
“Dood is-weydaarsi la’aanta ka jirta jaan-goynta go’aammada siyaasiga ah iyo iyadoo uusan jirin cod Soomaaliyeed oo si wanaagsan u soo bandhigi kara aragti qaran ayaa qayb ka ah masiibada ku habsatay shacabkeenna.” ayuu yiri C/raxman Caynte oo ah madaxa Machadka.